Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguIan
-Iyunithi enkulu ye-2BR Penthouse kuphuhliso olukhethekileyo lwe-Anvaya Cove,-
-Ixabiso elisisiseko li-5 PAX, i-1000 eyongezelelweyo ngentloko ukuya kuthi ga kwi-10 PAX
-Ezinye iiPasi zeKlabhu zasimahla ziyafumaneka-nceda ubuze ngexesha lokubhukisha
-Irenti ibandakanya ukusetyenziswa simahla kwe-Stunning Condo infinity pool kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho
-I-WiFi yasimahla kunye neNetflixTV
- Ikhitshi enezixhobo zokupheka i-microwave, i-rice cooker, iketile, i-toaster, iref. & kitchenware zibandakanyiwe
Iyunithi enkulu yekona yePenthouse yobutofotofo 96 sqm inc 2 BR kunye neebhalkhoni ezi-2, ezinembono ezingqukuva eAnvaya Cove's Sea Breeze Veranda Condo.
-I-Anvaya Cove yindawo yokuphumla ekhethekileyo kwaye igcinwe ngokweyona migangatho iphezulu, kumda wehlathi elinemvula, i-Sea Breeze Verandas yi-2-3 min yokuqhuba ukuya kwindawo entle, Dine kwenye yeendawo zokutyela ezine, njengoko uyonwabele. ukutshona kwelanga okumangalisayo phezu koLwandle lwaseNtshona kwiiPhilippines. Ukuqubha kwelinye lamachibi amaninzi okanye ukuphelisa uxinzelelo nge-massage kwindawo yokuphumla ye-Spa Retreat, Unokuthatha ithuba lejimu yanamhlanje okanye uhambe ekuseni ukuya elunxwemeni.
-Yiba ngomnye weendwendwe zethu kwaye uzive ukuba kunjani ukuhlala kwiyunithi ye-Luxurious Penthouse. Amagumbi amabini okulala amakhulu anegumbi lokuhlala elibanzi elineNetflix TV kunye ne-WIFI. Indawo yokutyela kunye nekhitshi iza ne:
- I-4 ring hob yombane
- I-Rice Cooker
- Iwayini kunye nezinye iiglasi
I-55" Smart TV, iCignal Cable kunye ne-intanethi ye-15MBPS yendlu.
-I-condo ilala kamnandi ukuya kutsho kwi-10 pax. Sinikezela ngelinen yebhedi, imiqamelo kunye neetawuli kumntu ngamnye obhukisiweyo.
-Iitawuli zaselwandle ziyafumaneka kwiklabhu yaselwandle.
-Ezinye iiPasi zeKlabhu zasimahla zinokufumaneka, nceda ubuze ngexesha lokubhukisha.
-Iindleko zokupasa ezongezelelweyo yi-1000 pax nganye. Ixabiso elihlawuliswa yiKlabhu linokutshintsha (ngemihla yencopho efana neeholide)
-Ukufikelela okuqinisekisiweyo kwiklabhu ngomhla wokungeniswa kunye nokufikelela simahla kwindawo entle yokuqubha kwi-condo nangaliphi na ixesha lokuhlala kwakho.
-Imirhumo yeklabhu ayiqukwanga neendleko zokurenta iyunithi.
-Ukuba uhlala ubusuku obu-2, unokukhetha ukusebenzisa izibonelelo zeClub kwakhona ngosuku lwakho lwe-2 ukuba uhlawula iifizi zokungena zemihla ngemihla.
-Akukho ukufikelela kwiklabhu yolwandle ngosuku lokuphuma, nangona kunjalo unokufikelela ngokupheleleyo kwi-Condo infinity pool ngaphandle kwentlawulo.
-Qaphela...Amaxesha aPhakamileyo eVeki eNgcwele, iKrisimesi kunye nawo onke amaNgcwele, kunye namaxesha eholide kawonke-wonke asekuhlaleni okanye esizwe awafanelanga nakuphi na ukuPasa kwamahala.
-Iixesha eliPhakamileyo-Iintlawulo zokungena kwiKlabhu yaseBeach... Okokuqala 5 pax kwi-1k/intloko/ngosuku, umntu wesi-6 ukuya ku-2k/intloko/ngosuku
-Nceda uqonde iifizi zokungena kwiKlabhu phambi kokuba ubhukishe. Iklabhu ye-Anvaya yiklabhu yobulungu ekhethekileyo kwaye ayivulelekanga kuluntu ngokubanzi. Iindwendwe ezingengawo amalungu kulindeleke ukuba zithobele imithetho nemigaqo-nkqubo yeQela.
-Soloko yazisa inani labantu elichanekileyo
-Ukufikelela kwiklabhu kukunika ilungelo loku:-
-Irenti yeTowel yePool yasimahla kumrhumo ngamnye ohlawulwayo wokungenwa (akukho ntlawulo yetawuli yasimahla yeendwendwe zasimahla)
- UFikelelo lwaseLwandle lwaBucala
- IiCabanas & Loungers
-Amachibi ama-3 amahle asecaleni laseLwandle kunye neTubhu eshushu
-Kid kaThixo Club
- Ukufikelela kwi-Spa ngonyango oluxabisa kakhulu
-Ukufikelela kwiiNdawo zokutyela zeKlabhu ngokutya okunexabiso elifanelekileyo
- Uncedo lwezoNyango olubandakanya iAmbulensi kwimeko kaxakeka.
-Zonke iipax ezindala kuneenyanga ezili-12 zihlawuliswa kwiklabhu - kukho izibonelelo ezibalaseleyo zeentsana apha.
-I-Maids / Yayas ihlawuliswa kwi-condo, kodwa ayihlawuliswa kwiklabhu, kodwa kuphela ekusebenzeni kwemisebenzi yabo kwaye ayikwazi ukusebenzisa izibonelelo.
-Abaqhubi abavumelekanga ukuba bahlale kwiiyunithi njengoko baneendawo zabo zokuhlala, ezinokuthi zibhukishwe xa befika, abavumelekanga ukuba bangene kwindawo yeklabhu yaselwandle kodwa banokungena kwigumbi lokuphumla lomqhubi kwaye banokuthenga amatikiti okutya ukuze batyele khona.
-Ngena kwiklabhu isuka kwi-7.00am, ungasebenzisa izibonelelo ngelixa ulinde ukujonga i-condo kuyo ngo-2pm.
-Ngomhla wokuhamba unokuhlawula iindleko ezipheleleyo zokusebenzisa izibonelelo zeklabhu yaselwandle okanye usebenzise i-condo infinity pool simahla.
-I-Anvaya Cove yindawo engenamali, kuya kufuneka uhlawule zonke izidlo zakho / iziselo / njl njl, ezithathwe kwiindawo zokutyela ze-Anvaya, uhambo oluhamba ngemoto, iitawuli zephuli kunye nezinye izinto ezizezinye kwikhadi lentlawulo yemihla ngemihla.
-Nceda uqaphele ukuba kuya kufuneka ukuba unikezele nge-ID yakho ye-ID ye-ID njengokhuseleko kwikhadi lentlawulo ye-Anvaya, kwaye oku kuya kubuyiselwa kuwe xa uphuma kwiklabhu kwaye uhlawule ityala lakho leklabhu.
-Igalufa e-Anvaya iyafumaneka kwimirhumo eyongezelelweyo ehlawulwa ngokuthe ngqo kwiklabhu, kodwa nceda uqaphele ngeentsuku ezithile (iimpelaveki kunye neeholide) ithintelwe kumalungu kuphela kwaye ivalwe rhoqo ngoLwesibini ukulungiselela ukugcinwa. Nceda uqaphele ukuba ukuba udlala igalufa e-Anvaya, uya kuba noxanduva ngokwasezimalini nangokusemthethweni ngawo nawuphi na umonakalo okanye ukonzakala owubangelayo kumaziko eklabhu, abasebenzi okanye umntu wesithathu okanye kwipropathi.
-Sikuvumela ukuba upheke kwi-condo apho uninzi lwabanini beeyunithi abakwenziyo, nangona kunjalo ukuba awubuyiseli ikhitshi kwinqanaba lokucoceka kuloo nto uyifumeneyo, siya kuhlawulisa i-PHP2,500 ngokuchasene nediphozithi yakho yokhuseleko olongezelelweyo. ixesha kunye nokuphazamiseka kokuba sibuyisele ikhitshi kwimeko apho sinokujonga undwendwe olulandelayo. Uyakhunjuzwa kwakhona ukuba ukupheka ukutya okunevumba njengentlanzi (i-shrimp, oononkala, intlanzi eyomisiweyo njl.njl.) kukwathintelwe ngokungqongqo kwaye kuya kutsala isohlwayo se-PHP2,500 - ivumba elibi lihlala kwi-condo kwaye alilunganga kundwendwe olulandelayo ukuba ngubani. iya kuhlala kwiyunithi!
-Ngenxa yemozulu yeTropiki apha, uninzi lweendwendwe zethu zifuna kuphela ilinen yokulala, ngoko ke asiboneleli ngezinto ezithuthuzelayo njengesiqhelo.
- Akutshaywa Ngaphakathi (Kulungile kwibalcony kodwa nceda ube nolwazelelelo ngothuthu lwakho njl.njl.) Intlawulo iya kuhlawuliswa kuye nabani na ofunyenwe etshaya ngaphakathi kwi-condo.
-Akukho izilwanyana zasekhaya zivunyelwe naphi na e-Anvaya Cove
- Akukho Maqela
- IKhosi yeGalufa kunye nedama lokuqubha kwii-condos zivaliwe ukuze zilungiswe rhoqo ngoLwesibini
Ndiza kufumaneka ukuze ndiqinisekise ukuba ufumana amava angcono ngokuhlala kwakho apha e-Anvaya cove.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Morong